Yehowa yɛ Ateasefo Nyankopɔn | Bɛn Onyankopɔn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
‘Ɔyɛ Ateasefo Nyankopɔn’
Owu ho yɛ den sen Onyankopɔn anaa? Ɛnte saa koraa! Ɛbɛyɛ dɛn na owu anaa “ɔtamfo” foforo bi ho ayɛ den asen “ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn”? (1 Korintofo 15:26; Exodus 6:3) Onyankopɔn betumi de owusɔre adi owu so nkonim, na wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ saa wɔ wiase foforo no mu. * Yɛbɛyɛ dɛn agye adi sɛ saa bɔhyɛ no bɛba mu? Onyankopɔn ankasa Ba Yesu ka ho biribi kyerɛ yɛn. Sɛnea ɔkaa asɛm no ka koma, na ɛma yenya anidaso sɛ ɛbɛba mu.—Kenkan Mateo 22:31, 32.
Ná Sadukifo nnye owusɔre nni, na bere bi a Yesu ne wɔn rekasa no, ɔkae sɛ: “Ɛdefa owusɔre ho no, monkenkanee nea Onyankopɔn ka kyerɛɛ mo no sɛ, ‘Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn’? Ɔnyɛ awufo Nyankopɔn na mmom ateasefo de.” Nea na Yesu reka ho asɛm wɔ ha no, ɛyɛ nkɔmmɔ bi a ɛkɔɔ so wɔ Onyankopɔn ne Mose ntam bɛyɛ afe 1514 A.Y.B. wɔ nkyɛkyerɛ bi a na ɛrehyew ho. (Exodus 3:1-6) Yehowa asɛm a ɔka kyerɛɛ Mose sɛ, “Mene . . . Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn” no, Yesu kyerɛɛ mu sɛ ɛma yenya gyidi paa sɛ owusɔre no bɛba. Adɛn nti na ɛte saa?
Nea edi kan no, ma yensusuw asɛm no ho nkɔ akyiri kakra. Bere a Yehowa ne Mose rekasa no, na tete agyanom Abraham, Isak ne Yakob awuwu dedaadaw. Ná Abraham awu ama mfe 329 atwam, na Isak awu ama mfe 224 atwam, na Yakob nso awu ama mfe 197 atwam. Nanso Yehowa anka sɛ “na meyɛ” wɔn Nyankopɔn na mmom ɔkae sɛ “mene” wɔn Nyankopɔn. Yehowa kaa tete agyanom baasa no ho asɛm te sɛ nea wɔte ase. Adɛn ntia?
Yesu kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “[Yehowa] nyɛ awufo Nyankopɔn na mmom ateasefo de.” Ma yensusuw saa asɛm no ho kakra. Sɛ owusɔre biara nni hɔ de a, anka Abraham, Isak, ne Yakob aka owu mu. Sɛ saa na ɛte a, ɛnde anka Yehowa yɛ afunu Nyankopɔn. Anka ɛno nso bɛkyerɛ sɛ owu ho yɛ den sen Yehowa, na ɛbɛkyerɛ sɛ onni ahoɔden biara a ɔde begye n’asomfo anokwafo afi owu nsam.
Ɛnde Abraham, Isak, Yakob, ne Yehowa asomfo anokwafo a wɔawuwu nyinaa, dɛn na yebetumi aka afa wɔn ho? Yesu kaa asɛm a emu yɛ duru yi: “Wɔn nyinaa te ase ma no.” (Luka 20:38) Nea ɛwom ara ne sɛ, Yehowa tirim a wabɔ sɛ obenyan n’asomfo anokwafo a wɔawuwu no, ɛbɛba mu ɔkwan biara so, ɛno nti na ohu wɔn sɛ wɔte ase no. (Romafo 4:16, 17) Yehowa a ne werɛ ntumi mfi ade no bɛkae saa nnipa no nyinaa, na bere a wahyɛ no so a, obenyan wɔn aba nkwa mu.
Ahoɔden a Yehowa wɔ no, ɛboro owu de so koraa
Sɛ ɛba w’adwenem sɛ wobɛsan ahu wo dɔfo bi a wawu a, ɛmma w’ani nnye anaa? Kae sɛ ahoɔden a Yehowa wɔ no, ɛboro owu de so koraa. Ɛbɔ a Onyankopɔn ahyɛ sɛ obenyan awufo no, biribiara ntumi nsiw no kwan. Ɛnde sua owusɔre bɔhyɛ no ho ade pii na hu Onyankopɔn a ɔbɛma saa bɔhyɛ no aba mu no ho nsɛm pii. Sɛ woyɛ saa a, ɛbɛma woabɛn Yehowa, ‘ateasefo Nyankopɔn’ no.
February Bible Akenkan
^ nky. 3 Onyankopɔn bɔhyɛ a ɛne sɛ nnipa benya owusɔre akɔ trenee wiase foforo mu no, wopɛ sɛ wuhu ɛho nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 7. Yehowa Adansefo na wotintimii.